Ngaba abaqeshi banokusebenzisa i-GPS ukulandelela abasebenzi? | I-Singapore ephezulu ye-GPS ye-GPS Tracker ye-Autism / ye-Autistic yabantwana kunye neDementia yabantu abadala
Ukusetyenziswa kwenkqubo yokulandela umkhondo ye-GPS:
IGPS yinto ephambili yesayensi. Yenza ubomi bethu bube lula kwaye inezicelo ezininzi. Isisiseko inomsebenzi wokufumana nokulandela umkhondo wesithuthi, umntu, isilwanyana okanye nayiphi na impahla. Ingasetyenziselwa ukubala umgama kunye nesantya. Nangona kunjalo, eyona nto siyixhalabeleyo apha kukuba ngaba ingasetyenziswa ngabaqeshi ukulandela abasebenzi babo? Nanku umbuzo apha. Makhe sijonge le nto.
Ngaba abaqeshi banokubalandela? Ukuba siyayibona le nto ngokwembono eqhelekileyo, abaqeshi banokubalandelela ngokulula abasebenzi babo kwaye abayi kuba nabunzima ekwenzeni oku. Kukho iindlela ezilula abanokwenza ngazo. Banokulandela umkhondo kwizithuthi ezizezabo. Zininzi ezinye iindlela apho abaqeshi banokulandelela abasebenzi babo. Kodwa ukuba siyayibona le nto ithi, "Ngaba kufanelekile abaqeshi ukuba balande abasebenzi babo?". Kule meko, kukho imigaqo ethile ekufuneka ithathelwa ingqalelo. Abaqeshi banamalungelo onke okulandelela abasebenzi babo kodwa besebenza iiyure zabo zokusebenza. Kodwa ngaphandle kwamaxesha okusebenza, akufuneki bagcine umkhondo wabasebenzi njengoko sisenzo esibi nesokuziphatha okubi.
Banokulandelelwa njani abasebenzi?
Siyabona ukuba abaqeshi baneendlela ezininzi zokulandelela nokubeka esweni abasebenzi babo. Nangona kunjalo, siqokelele iindlela ezisisiseko ezisetyenziswa rhoqo. Makhe sijonge kubo:
Ukulandela umkhondo wenqwelo:
Eyona ndlela isisiseko yabaqeshi yokulandelela nokubeka esweni abasebenzi babo ngokulandela izithuthi zabo. Sinokufumana izixhobo ezininzi ezilandelelweyo zokulandela umkhondo kwimarike ezinokusetyenziselwa ukulandela umkhondo wezithuthi. Ezi zixhobo zokulandela umkhondo ziqhotyoshelwe nakweyiphi na inqwelo yemoto yomqeshwa kwaye okuseleyo kukude nesixhobo. Iya kugcina umkhondo wabasebenzi ngempumelelo. Ke ngoko, eyona ndlela isisiseko yokufumana ukulandelela abasebenzi bethu kukulandela izithuthi zabo. Kodwa ineempazamo ezithile. Ngokwesiqhelo, abasebenzi basebenzisa izithuthi zomsebenzi wabo. Kodwa oku kuthintelwe kuphela ezindleleni. Kanye njengokuba imoto ipake kwindawo ekufikwa kuyo, asinakutsho ukuba uphi umsebenzi apho. Kusenokwenzeka ukuba wayeye kwenye indawo. Ke ngoko, asinakuba nendawo efanelekileyo yabasebenzi ngale ndlela.
Ukulandelelwa kwefowuni eyi-Smart:
Le yenye indlela yokulandela umkhondo nokubeka iliso kubasebenzi. Iifowuni zeSamsung zizixhobo eziqhelekileyo kweli lizwe. Sinokubona phantse nganye kwaye wonke umntu namhlanje une-smartphone okanye ubuncinci iselfowuni. Iifowuni eziphathwayo ziye zaphuhliswa ngendlela exhasa ukuKhangelwa kweGPS ngokusisigxina kubo. Le nkqubo inokusetyenziswa ngabaqeshi ngenjongo yokulandelela abasebenzi babo. Isixhobo somqeshwa siya kuqhagamshelwa kwisixhobo somqeshwa kwaye siya kuvumela umqeshi ukuba aqhubeke nokujonga umqeshwa wakhe. Ayizukubangela ingxaki njengakwimeko yezithuthi. Kuba kucacile ukuba iifowuni eziphathwayo azinakushiywa naphi na okanye ziqhele ukungabi kude nomsebenzisi. Ke ngoko, eyona ndlela sibona ngayo ukulandela umkhondo wabasebenzi kukuKhangela ngeFowuni eyi-Smart. Nangona kunjalo, umkhondo kufuneka ube nemithetho nayo. Kuya kwenziwa kuphela kwiiyure zokusebenza. Ngaphandle koko, iba sisenzo esingekho mthethweni kumqeshi.
Imigaqo yokulandela umkhondo wabasebenzi:
Malunga nokulandela umkhondo wabasebenzi ngabaqeshi uchaphazelekayo, kukho imigaqo ethile kunye nezikhokelo ekufuneka zigcinwe engqondweni zilandelwe. Yinto enobuthathaka kakhulu ukwazi ukuba abasebenzi bakho bayasebenza nzima kwaye ukuthengiswa kwenkampani nako kunika iziphumo ezilungileyo. Ke ngokusisiseko, konke oku kuxhomekeke kumqeshi nakwindlela ayisebenzisa ngayo inkqubo yokulandela umkhondo.
Makhe sijonge eminye yemithetho ebalulekileyo ekufuneka iqashiwe ngumqeshi:
Indalo yoMgaqo-nkqubo oBhaliweyo:
Inkampani kufuneka iphuhlise umgaqo-nkqubo wenkampani osekwe kwezona ndlela zilungileyo zokulandela umkhondo wabasebenzi be-GPS, kwaye umgaqo-nkqubo kufuneka unyanzeliswe ngumntu wonke ukuba awulandele. Emva koko abaqeshi okanye iintloko zenkampani kufuneka zenze umgaqo-nkqubo ngemvume yomqeshwa ngamnye. Imigaqo kufuneka iboniswe phambi kwawo wonke umsebenzi kwaye kufuneka banikwe ilungelo lokunika izimvo ngokukhululekileyo malunga nomgaqo-nkqubo wenkampani. Ngale ndlela, abaqeshi banokugcina umkhondo wabasebenzi malunga neemvume zabo. Kufuneka baphinde bahlole izikhokelo ubuncinci ngonyaka ukuqinisekisa ukuba ukulandelwa kwe-GPS kuxhasa ishishini labo ngeendlela ezifanelekileyo kwaye kubonise naluphi na utshintsho olusebenzayo emthethweni.
Ukulandelela kunye noMthetho:
Kule ndawo yokulandela umkhondo nokubeka esweni, ngokuqinisekileyo urhulumente unendima ebalulekileyo. Ngexesha lokupapashwa, imithetho yomdibaniso iyalela into urhulumente anokuyenza nongenakwenza ngokulandela umkhondo we-GPS, kodwa bambalwa imithetho ethintela ishishini ekubeni lihlole abasebenzi ngeGPS. Kwelinye icala, amazwe anepatchwork yemithetho yabucala ethintela ukulandela umkhondo.
6161 Ubutyebi Bonke Imibukiso ye-22 Namhlanje